Pokémon GO dia ho tonga amin'ny volana Jolay miaraka amina gadget manokana azo itondra | Androidsis
Nintendo dia nanambara fa Pokémon GO dia ho hita amin'ny volana Jolay ary ny kojakoja azo ampiasaina dia mitentina 35 $
Ny lalao horonantsary nampitomboina izay azontsika atao mihaza pokemons ao amin'ny manodidina anay, nanomboka ny beta nakatona tamin'ny volana lasa teo. Lalao video iray izay niarahan'ny Nintendo niasa tamin'i Niantic, fanadihadiana iray izay nitondra anay lalao video hafa manana kalitao avo lenta antsoina hoe Ingress ary izany koa dia nampiasa zava-misy nitarina hanomezana karazana traikefa fialam-boly hafa.
Tamin'ny famelabelaran'i Nintendo tao amin'ny E3 dia nambara fa ho Pokémon GO misy amin'ny finday avo lenta indraindray amin'ny volana Jolay. Ary ny tena tsy nampoizina dia ny handefasan'ny Nintendo Pokémon Go Plus, fitaovana entina miakanjo toy ny fehin-tànana mihetsika Bluetooth izay ahafahan'ny mpilalao mahazo fanairana na "mihaza" Pokémon aza nefa tsy mila maka ny telefaonin'izy ireo. Amin'ny faran'ny volana Jolay dia hisy ity gadget ity izay azo antoka fa hamidy toy ny donat.
Este gadget azo akanjo Midika izany fa ireo mpankafy Pokémon dia hanana ny safidiny hitafy izany amin'ny fotoana rehetra mba tsy hialana amin'ny fotoana rehetra hazaza ireo Pokémon dia ho hitan'izy ireo mivangongo eny amin'ny araben'ny tanàna.
Pokémon GO dia hiantoka ny mpilalao rehetra manerantany mivoaka any amin'ny tontolo tena izy mikaroka, mihaza ary miady amin'ny Pokémon anao, amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny raikipohy lalao ho an'ny zava-misy nampitomboina izay mifototra amin'ny Ingress, ny lalao voalohany navoakan'i Niantic.
Nintendo dia hampiasa ny maodely freemium ho asio micropayments amin'ny karazany, na dia tsy maintsy haseho aza izany. Na izany na tsy izany dia tsy mino izahay fa haharitra ny fotoana hahalalantsika ny ambiny amin'ny antsipiriany rehetra noho ny akaiky azy amin'ny volana jolay. Toy ny lalao konsolà tanana, ny mpilalao dia mila manangona sy manangona Pokémon matanjaka indrindra hahafahana miady sy mihaza ireo zavaboary "angano".
Handeha ny Gym Pokémon, faritra misy azy manokana ho an'ny toerana, izay tsy maintsy hiadian'ny mpilalao hafa amin'ny avatar azy ireo haka azy ireo. Tsy hainay raha avoaka miaraka amin'ny Android sy iOS izy io, ka manam-paharetana kely.
Afaka mahita ampahany amin'ny lalao ianao avy amin'ity fidirana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Nintendo dia nanambara fa Pokémon GO dia ho hita amin'ny volana Jolay ary ny kojakoja azo ampiasaina dia mitentina 35 $
Fleksy dia novidin'i Pinterest